Ilhaan Cumar: Ma ahan wax la fiirsan karo xaaladda gurracan ee Yemen ee ay wadaan Sucuudiga iyo Imaaraatka - Guuguule News Network
(Guuguulenews)-Ilhaan Cumar: Ma ahan wax la fiirsan karo xaaladda gurracan ee Yemen ee ay wadaan Sucuudiga iyo Imaaraatka.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa sheegtay in xaaladda guracan ee ay ku nool yihiin dadka Yemen ay ka dhalatay faragelinta ba’an ee ay dalkaasi ku hayaan Sucuudiga iyo Imaaraatka, qasabna ay tahay in la joojiyo.
“Waxa ka socda Yemen ee ay Sucuudi Carabiya iyo Imaaraatka horseedka u yihiin wax la fiirsan karo ma ahan. Wax aad u xaq daran waaye,”
Waxa ay sheegtay inay madaxweynaha Mareykanka ka codsadeen inuu joojiyo xiriirka dhaw ee uu labadaas dal la leeyahay amaba uu dib eego: “sababtoo ah waxyaabaha aan aaminsannahay iyo sida ay ku socoto Sucuudi Carabiya waa wax iska hor imaanaayo.”
Ilhaan Cumar waxa ay sababaysay sababta ay ugu danqatay dadka Yemen ee ay dhibaatooyinka la dageen iyadoo sheegtay inay tahay in bini’aadamnimada la tixgaliyo: “marmarka qaarkood inaan xasuusanno waaye inaan bini’aadam nahay. Haddaan xitaa Muslimnimadii ka soo tagno, bini’aadminimadeenna inaan xasuusanno waaye. In qof miskiin ah oo lagu xaqdaroonaayo inaad u danqatid waaye.”
Ilhaan waxa ay sheegtay in aanan loo dulqaadan karin in lagu dhaqmo laba wajiilanimo: “Waddankeenna Mareykanka haddii uu ka shaqeynaayo oo uu aaminsan yahay xuquuqda aadanaha, haddii uu yahay waddan aaminsan in dad masaakiin ah inay ku dhimayaan dalka Yemen oo aan taakulo u dirno dagaalka lagu wadana qeyb kuma lahaan karno.”
Waxa ay intaasi ku dartay in taasi aanay ahayn go’aan ay Ilhaan kaligeed gaartay ee uu yahay mid ay isku raacsan yihiin inta badan xildhibaannada Aqalka Koongareeska Mareykanka.